Yonke Inxamnye neRashiya yaseKaliningrad
I-Russian Exclave Oblast
Ummandla omncinci wase-Russia oblast waseKaliningrad yi-exclave e-200 ukusuka kude nomda we-Russia. I-Kaliningrad yayiyimpango yeMfazwe Yehlabathi II , eyabelwe eJamani iya kwiSoviet Union kwintlanganiso yasePotsdam eyahlula iYurophu phakathi kwamandla ahlangeneyo ngo-1945. I-oblast yindawo enemibala ebomvu eLwandle lwaseBaltic phakathi kwePoland neLithuania, malunga isiqingatha sobunzima beBelgium, ama-5,830 mi2 (15,100 km2).
Idolophu yaseprayimari kunye nechwethi yaziwa ngokuba yiKaliningrad.
Eyaziwa ngokuthi yiConigsberg ngaphambi kokusebenza kukaSoviet, loo mzi wasungulwa ngo-1255 kufuphi nomlambo we-Pregolya. Ifilosofi u-Immanuel Kant wazalelwa eKongigsberg ngo-1724. Inkunzi enkulu ye-German East Prussia, iKonigsberg yayiyindlu yokuhlala enkulu yasePrussian Royal Castle, yabhujiswa kunye nesixeko esikhulu kwiMfazwe Yehlabathi II.
I-Konigsberg yaqanjwa ngokuthi iKaliningrad ngo-1946 emva koMikhail Kalinin, "umkhokeli" osemthethweni weSoviet Union ukususela ngo-1919 ukuya ku-1946. Ngelo xesha, amaJamani ahlala kwi-oblast aphephelwa ngaphandle, athatyathwe ngabemi baseSoviet. Nangona kwakukho iziphakamiso zakuqala zokutshintsha igama likaKaliningrad ukuya eKonigsberg, akukho nanye yaphumelela.
Ichweba elingenaqhwa laseKaliningrad eLwandle lwaseBaltic lalihlala kwikhephe yaseSoviet Baltic; ngexesha leMfazwe yamaCold 200,000 ukuya kuma-500 000 asemasimini kuloo ndawo. Namhlanje ama-25,000 amajoni ahlala eKaliningrad, isalathisi sokunciphisa ingozi ebonakalayo evela kumazwe ase-NATO.
I-USSR izame ukwakha iNtlu yeeNtshonalanga ezingama-22, "isakhiwo esibi kunazo zonke emhlabeni waseRashiya," eKaliningrad kodwa isakhiwo sakhiwe kwipropati yenkqantosi. Ngelishwa, le nqaba yayineengqungquthela ezingaphantsi komhlaba kwaye isakhiwo saqala ukuwa ngokukhawuleza nangona sisekhona, singasweleki.
Emva kokuwa kwe-USSR, iLituania kunye neyase-republic ye-Soviet yafumana ukuzimela kwayo, yamisa uKaliningrad waseRashiya. I-Kaliningrad kwakufuneka iphuhliswe kwixesha lase-Soviet emva kwe " Hong Kong yaseBaltic" kodwa ulwaphulo-mthetho lugcina kakhulu imali. I-Kia Motors yaseMzantsi Korea yaseKorea inomveliso eKaliningrad.
Izitimela zidibanisa iKaliningrad eRashiya nangona iLithuania neBelarus kodwa ukungenisa ukutya okuvela eRashiya ayinayo imali. Nangona kunjalo, i-Kaliningrad ijikelezwe ngamazwe aseYurophu-malungu, ngoko ke ukurhweba kwiimarike ngokubanzi kunokwenzeka.
Abantu abangaba ngu-400,000 bahlala kwisixeko esikhulu saseKaliningrad kunye nesonke isiqingatha esinye kwisigidi se-oblast, esimalunga nesinye sehlathi.
Umgaqo-nkqubo waseMerika waseNgaphandle phantsi kweGeorge Washington
2008 I-Mustang Shelby GT
Isitembu seCult of Artemis sase-Efese
UMTHETHO Ulinganisa Ukwamkelwa kwieKholeji ze-Nebraska zeminyaka emine
Ziziphi Iingelosi Zingelosi?
Iintlobo zeMpawu zoMndeni
Ulwakhiwo lweNqaku elichazayo
Izipho zeeholide zokugqibela
Iimpawu zeComputer ziPhuma
Ukuhlaziywa kwe-Honda CRF250L ka-2013: UMnu
Isifundo Ukuzalisa Inkcazo kunye nemizekelo